Turkey နိုင်ငံမှ တင်သွင်းပြီး Chorestrol လုံးဝမပါဝင်သော Omega-6 and9နှင့် Vitamin E ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ သဘာဝ နေကြာဆီ&quot;Orkide&quot;နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ များပြားစုံလင်လှတဲ့ အစားအစာတွေကြောင့် အ၀လွန်ခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနှင့် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများက နေ့စဉ်ကမ္ဘာ့လူထုကို ခြောက်လှန့်လျက်ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ် စားသုံးနေသော အစားအစာများမှ မလိုလားအပ်တဲ့ အဆီပို(Cholestrol) တွေများပြားလာမယ် ဆိုရင်တော့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါတို့ကို ဖြစ်စေပြီး ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ နေကြာဆီက ဆေးပညာမှာ လက်ခံထားတဲ့ Omega-6 and9က ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမူအတွက် အရေးပါသော ပြင်ပဖြည့်စွက်ဓာတ်စာဖြစ်ပြီး Anti-Oxidant action ရှိတဲ့ Vitamin E ဟာအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်အသားရေလှပမူကိုလည်း အထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ နေ့စဉ်စားသောက်နေသော အစားအသောက်များထဲမှာ Cholestrol ပါဝင်မူနည်းပြီး Omega-6 and9နဲ့ Vitamin E ပါဝင်ရန်အရေးကြီးလှပါသည်။
1 ~ 1 $
Rice hoist → Repeat grind → Desanding by proportion → Rice hoist → Rice storage → Washing rice by shooting → Separating water and rice → Jordaning and sieving → Pumping slurry and reserve slurry → Frame filter dehydrating →Steawing and Mixing → Pressed tablet → Thread extruding → Aging → Losse thread → High pressure steaming → Washing → Manual molding (or) Auto molding → Collect rice flour Production Parameters 1. Production capacity : 8Tons - 25 Tons / Day 2. Noodles Specifications : Can order 3. Installed power : 50 - 150 Kw
ဇွဲ နှမ်းဦးရည်သန့် 
ဇွဲ နှမ်းဦးရည်သန့် သည် 100% သဘာဝပစ္စည်းများဖြင့်သာ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အထူးသင့်လျော်သော အာမခံနှမ်းဆီအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်ရရှိထားပြီး လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ဇွဲ နှမ်းဦးရည်သန့် ကို ၁၀ ကျပ်သား၊ ၂၅ ကျပ်သား၊ ၃၅ ကျပ်သား (600 ML)၊ ၅၀ ကျပ်သား၊ ၆၀ ကျပ်သား (1 Liter)၊ ၂ ပိဿာ၊ ၃ ပိဿာ၊ ၅ ပိဿာဘူးများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဇွဲ နှမ်းဦးရည်သန့် ကို လက်လီ (သို့ ) လက်ကား ဖြန့် ဖြူးလိုပါက ရန်ကုန်ဖြန်ချိရေးကတော့ အမှတ် -၈၄၊ မင်းသိဒ္ဓိကျော်စွာလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံ (3)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ပြည်ဖြန်ချိရေးကတော့ အမှတ် ၃၄၊ ထီးစုလမ်း၊ ရွှေကူရပ်၊ ပြည်မြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။
ဇွဲ ပဲဆီသန့် 
ဇွဲ ပဲဆီသန့် သည် မြေပဲဆီစစ်စစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသောကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အထူးသင့်လျော်သော ဆီအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်ရရှိထားပြီး လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ 100% သဘာဝမြေပဲ ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အာမခံမြေပဲဆီစစ်စစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဇွဲပဲဆီသန့် ကို ၁၀ ကျပ်သား၊ ၂၅ ကျပ်သား၊ ၃၅ ကျပ်သား (600 ML)၊ ၅၀ ကျပ်သား၊ ၆၀ ကျပ်သား (1 Liter)၊ ၂ ပိဿာ၊ ၃ ပိဿာ၊ ၅ ပိဿာ ဘူးများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဇွဲ ပဲဆီသန့် ကို လက်လီ (သို့ ) လက်ကား ဖြန့် ဖြူးလိုပါက ရန်ကုန်ဖြန်ချိရေးကတော့ အမှတ် -၈၄၊ မင်းသိဒ္ဓိကျော်စွာလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံ (3)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ပြည်ဖြန်ချိရေးကတော့ အမှတ် ၃၄၊ ထီးစုလမ်း၊ ရွှေကူရပ်၊ ပြည်မြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။